Qaramada midoobay kulan ka leh nidaamka maaliyadda Soomaaliya & Ilaha dhaqaale Al Shabaab. | Allbalcad Online
Home WARARKA Qaramada midoobay kulan ka leh nidaamka maaliyadda Soomaaliya & Ilaha dhaqaale Al...
Qaramada midoobay kulan ka leh nidaamka maaliyadda Soomaaliya & Ilaha dhaqaale Al Shabaab.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa 15-ka October, 2020 oo ku beegan maalinta oo Khamiis ah waxaa u qorsheysan shir xasaasi ah kaasoo ay ka yeelanayaan warbixin laga gudbiyey Soomaaliya.
Warbixinta oo ay diyaariyeen lix khuburo fadhigoodu yahay caasimadda Kenya ee Nairobi, waajibaadkooduna yahay dabagalka dhacdooyinka Soomaaliya ayaa ku saabsan Nidaamka maaliyada Soomaaliya iyo dhaqaalaha ay Al Shabaab helaan.
Wadamada xubinta ka ah Golaha Ammaanka oo ah hay’adda ugu sareysa Jamciyada Qurumaha Ka Dhaxeysa ayaa lagu waddaa in ay kulankooda kadib qoraal ay ku caddeynayaan mowqifkooda maaliyadda ee Soomaaliya.
Wargeyska New York Times oo faafiyey nuqul kamid ah warbixintaas ayaa sheegay in ay Al Shabaab ay heshay hab cusub oo ay malaayiin Doolar-ka Mareykanka kaga samayso gudaha Soomaaliya.
Sidda ku xusan warbixinta, Al-Shabaab ayaa cunaqatabeynta caalamiga ah waxay kaga badbaadey in ay maalgelin ku sameysatay ganacsiyo maxali ah, hanti ma guurto ah iyo la macaamilka bangiyadda gudaha.
Meelaha dakhligan ka yimid, sidda ku cad qormadda waa $2.4 milyan oo ka soo xarootay jid-gooyooyinka Jubooyinka iyo $5.8 milyan oo kaga timid ganacsi ay canshuureen kana soo degtay dekada Kismaayo.
Qaylo-dhaanta kasoo yeertay Jamciyada Qurumaha Ka Dhaxeysa ayaa timid xilli waddanka uu doorasho u dareerayo isla markaana ay jirto cabsi ah in Al-Shabaab ay ku yeelato murashax, iyaddoo adeegsaneysa awoodeeda dhaqaale sida lagu soo xigtay dadka indh-indheeya siyaasadda Soomaaliya.
Previous articleTaliyaha CXD oo Socdaal Kumaraya Deegaano Katirsan G/Gedo
Next articleQM oo fatahaadaha Soomaaliya ku bixineysa lacag farabadan